Zhejiang Yuking Technology Co., Ltd. waa soo saaraha xirfad iyo dhoofisaa oo ka walaacsan la design ah, horumarinta iyo wax soo saarka ee Auto Hawada hawadda, iyo qaar ka mid ah la xiriira Auto A / C Qaybo. Dhamaan waxyaabaha our raacaan heerarka tayada ee caalamiga ah oo ay si weyn u mahad kala duwan ee suuqyada dunida oo dhan.
Our goobaha si fiican u qalabaysan oo gacanta u fiican oo tayo leh oo dhan heerarka kala duwan ee wax soo saarka noo saamaxaysa in la damaanad qaado guud ahaan qancinta macaamiisha. Waxaana lagu siinayaa oo deggan iyo noocyo kala duwan oo ka mid ah Auto A / C hawadda iyo qaybo Auto A / C qalbigooda oo dhan our. Sidaas darteed alaabta oo tayo sare leh iyo adeegga macaamiisha u fiican, our alaabta ay horeba u dhoofin in North America, South America, Koonfur-Bari Asia, Middle-East iyo dalalka kale ee la xiriira.
Waxaan ku adkaysanaya inay "Excellent Quality, Naseexayn Trust, iyo Adeegga Perfect". Ha ka welwelina macaamiisha ah ee ka welwelina, maleeyay in fikirka macaamiisha ah ee, caawiyo baahida macaamiisha ah ee. Waxaan keeno dunida dhaqaale iibsada. Daacadnimo ku hayaa waxay leeyihiin iskaashi muddo dheer oo horumarinta macaamiisha oo dhan. Ku soo dhawoow kasta oo saaxiibo nala soo xiriir!